Nchekwa na Ịmụta Ụgwọ Ụgwọ Ụtọ Ịhụnanya, mmekọahụ na Intanet
Home Learning Ebe nchekwa & Mmụta
“Ebumnuche ncheta abụghị ka anyị cheta oge gara aga, kama ka anyị tụlee ọdịnihu. Ebe nchekwa bụ ngwá ọrụ maka ịkọ amụma. ”
Nke a bụ okwu TED abụọ bara uru na ike ịmụ ihe.
Nke mbụ bụ site na prọfesọ Stanford Carol Dweck na ike ikwere na anyị nwere ike imeziwanye. Ihe ọ na-ekwu bụ na "mgbalị na ihe isi ike" nke ịnwale pụtara ụmụ anyị na-eme njikọ ọhụrụ dị ka anyị na-amụ na imeziwanye. A na-ejikọta nke a na ike iji nyere aka na-akpụ isi awọ / eriri na cortex prefrontal.
Nke abụọ bụ site Angela Lee Duckworth ma weere òkè dị ka "ọrụ" na-emepụta ihe ịga nke ọma.
Mụta bụ mgbanwe n’omume sitere na ahụmihe. Ọ na-enyere anyị aka ime mgbanwe maka gburugburu ebe obibi anyị. Oge gboo bụ ụdị mmụta a na - akpọ “Pavlovian Condition” mgbe ụfọdụ. Ugboro ugboro abụọ nke mgbịrịgba na nri mere ka nkịta Pavlov na-ada ụda na ụda mgbịrịgba naanị. Ihe atụ ndị ọzọ nke ọnọdụ Pavlovian ga-amụta inwe nchekasị:
1) Mgbe ị na-ahụ ọkụ ndị uwe ojii na-enwu gbaa na mirror anya gị; ma ọ bụ
2) Mgbe ị na-anụ ụda n'ọnụ ụlọ ụbụrụ.
Onye na-ahụkarị porn onye ọrụ nwere ike ịdabere na agụụ mmekọahụ ya ka ọ dị ncha, na-elele ụfọdụ omume, ma ọ bụ na ịpị na vidiyo na vidiyo.
Akụkụ a dabeere na ihe si na "Ụbụrụ si n'elu gaa na ala"Akwụkwọ nduzi na-emepe emepe nke Mahadum McGill wetara na Canada. A na-atụ aro ya nke ukwuu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe.
Ịmụta bụ usoro nke na-enye anyị ohere ịnweta nkwupụta ọmụma, mmetụta mmetụta uche (mmetụta uche), na mmetụta ndị nwere ike imetụta àgwà anyị. Ịmụta bụ isi ọrụ nke ụbụrụ, nke ngwa a na-agbanwe mgbe nile ka ọ dị mma iji gosipụta ahụmahụ ndị anyị nwere.
A na-amuta ihe omumu na ntinye koodu, ihe mbu n'iburu n'iburu n'isi. Nsonaazụ ya - ncheta - bụ nnọgidesi ike nke data autobiographical na nke ihe ọmụma n'ozuzu.
Ma ncheta abụghị kpamkpam ikwesị ntụkwasị obi. Mgbe ị ghọtara otu ihe, ìgwè nke neurons na akụkụ dị iche iche nke ụbụrụ gị na-akọwa ihe gbasara ọdịdị ya, agba, ísì, ụda, na ihe ndị ọzọ. Ụbụrụ gị na-eme ka njikọ dị n'etiti ìgwè dị iche iche dị iche iche, na njikọ ndị a bụ echiche gị banyere ihe ahụ. N'ikpeazụ, mgbe ọ bụla ịchọrọ icheta ihe ahụ, ị ​​ghaghị ịghaghachi mmekọrịta ndị a. Usoro nhazi nke mmezi nke cortex mere maka nzube a, Otú ọ dị, nwere ike ịgbanwe ncheta gị maka ihe ahụ.
Ọzọkwa, na usoro ihe ncheta nke ụbụrụ gị, a na-eburu ihe ọmụma ndị dịpụrụ adịpụ n’isi dị ka ndị na-ejikọ ihe ọmụma dị adị n’isi. Ka ị na-enwekwu mkpakọrịta n'etiti ozi ọhụrụ ahụ na ihe ndị ị mabụ, ka ị ga-amụ ya nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-enwe oge dị mfe karị icheta na ọkpụkpụ úkwù jikọtara ya na apata ụkwụ apata ụkwụ, ọkpụkpụ apata ụkwụ na-ejikọta ya na ọkpụkpụ ikpere, ma ọ bụrụ na i nweela ụfọdụ ihe ọmụma gbasara anatomi ma ọ bụ mara abụ ahụ.
Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtawo ọtụtụ ihe nwere ike ịmetụta mmetụta ọrụ nchekwa dị irè.
1) Iche anya nke nche, anya, ịṅa ntị, na itinye uche. A na-ekwukarị na ọ bụ ngwá ọrụ nke na-edeba ozi n'ime ebe nchekwa. Nlebara anya bụ ihe ndabere nke neuroplasticity. Ndacha nti nwere ike belata oke arụmọrụ. Ogologo oge ihuenyo nwere ike imebi ebe nchekwa na -emepụta mgbaàmà ndị yiri ADHD. Anyị nwere ike melite ike ncheta anyị site n'ime ka anyị gbalịsie ike imegharị ma jikọta ozi. Mmetụta ndị na-akwalite ọdịdị anụ ahụ, dị ka erotica, na-achọghị mgbalị siri ike ịchọta. Ọ chọrọ mgbalị siri ike iji nọgide na-ele ya anya.
2) Mmasị, ike nke mkpali, na mkpa ma ọ bụ mkpa. Ọ dị mfe ịmụta mgbe isiokwu ahụ na-adọrọ mmasị anyị. N'ihi ya, mkpali bụ ihe na-eme ka ncheta dịkwuo elu. Ụfọdụ ndị na-eto eto ndị na-anaghị eme nke ọma na isiokwu ndị a na-amanye ha ịga akwụkwọ na-enwekarị ncheta maka ihe ndekọ banyere egwuregwu ha ma ọ bụ weebụsaịtị.
3) Mmetụta mmetụta (mmetụta uche) ejikọtara ya na ihe ka eburu n'isi, na ọnọdụ mmadụ na ike mmetụta. Ọnọdụ obi anyị mgbe ihe mere mere nwere ike imetụta oke ncheta anyị. Ya mere, ọ bụrụ na ihe omume na-akpasu iwe ma ọ bụ na-akpali akpali, anyị ga-abụ ihe ncheta doro anya banyere ya. Iji maa atụ, ọtụtụ mmadụ na-echeta ebe ha nọ mgbe ha nụrụ banyere ọnwụ Princess Diana, ma ọ bụ maka mwakpo nke Septemba 11, 2001. Nhazi nke ihe mmetụta uche mere na ebe nchekwa gụnyere norepinephrine / noradrenaline, a neurotransmitter nke a tọhapụrụ n'ọtụtụ buru ibu mgbe anyị nwere obi ụtọ ma ọ bụ mgbakasị. Dị ka Voltaire si kwuo ya, ihe na-emetụ n'obi ka edere na ncheta ahụ.
4) Ebe, ìhè, ụda, esi ísìNa nkenke, dum onodu nke edere ebe a na-edekọ ya na ozi a na-eburu n'isi. Usoro ncheta anyi di otua. N'ihi ya, ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu icheta otu eziokwu, anyị nwere ike nwee ike weghachite ya site na icheta ebe anyị mụtara ya ma ọ bụ akwụkwọ ma ọ bụ weebụsaịtị ebe anyị si mụta ya. Enwere foto dị na ibe ahụ? Ihe ọmụma ahụ dị na elu nke ibe, ma ọ bụ ala? A na-akpọ ihe ndị dịka "icheta ihe oyiyi". Na n'ihi na anyị na-eburu ihe omuma ya n'isi na ihe ọmụma anyị na-amụta, site n'icheta ọnọdụ a anyị nwere ike ọtụtụ mgbe, site na otu mkpakọrịta, cheta ozi n'onwe ya.
Ichefu na-eme ka anyị wepụ ihe ọmụma dị ukwuu nke anyị na-arụ kwa ụbọchị ma ụbụrụ anyị kpebiri na ọ gaghị adị mkpa n'ọdịnihu. Ụra na-enyere aka na usoro a.
<mụ ihe bụ Igodo Mmekorita nke nwoke na nwanyi >>